Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde oo Habeenkii Shaqeynaya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde oo Habeenkii Shaqeynaya
July 31, 2017 admin576
Wasiirka wasaaradda Gaadiidka Dhulka iyo cirka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad, oo maanta la hadlay, warbaahinta ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho loo dhameystirey qalabkii sahlayay duulimaadyada habeenkii islamarkaana garoonka uu shaqeynayo in ka badan 16 saacadood.
Waaxda saadaasha hawada ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa shirkadaha isgaarsiinta ee Tawaradooda ku yaalaan degmooyinka Wadajir, Waaberi, Hodan, Xamar-weyne, Xamar-Jajab iyo Warta nabadda in ay ku xiraan leerar muujinaya tawaradooda si diyaaradaha habeenkii aysan u dhibaateyn.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku howlan sidii ay ula soo wareegi laheyd maamulka hawada dalka, Ra’iisul wasaaraha xukuuumadda Soomaaliya ayaana dhowaan daah furey duulimaadka habeenkii ee Garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Garoonka ayaa shaqeyn doona 6:00 AM ilaa 10:00 PM habeenimo. Waxaana xalay ka duulay duulimaadkii ugu horeyey.
Hay’adda duulista hawada oo beenisay inay xayirtay duulimaadyada aada kismaayo
September 25, 2019 Duceysane
Xog dheeraad ah : Qarixii Maanta ka dhacay Wasaaradda Arimaha Gudaha (Sawirro)